Fanka & Suugaanta – Page 4 – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Fanka & Suugaanta	Xaalada caafimaad ee Abwaan Sangub oo laga deyrinaayo (SAWIRRO)
October 6, 2016	Fanka & Suugaanta, Wararkii ugu dambeeyay
Comments Off on Xaalada caafimaad ee Abwaan Sangub oo laga deyrinaayo (SAWIRRO)
196 Views Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho, waxaa la dhigay Abwaan Maxamuud C/lahi Ciise (Sangub) oo muddooyinkii dambe ku xanunsanaayay Magaalada Muqdisho. Xaalada Abwaanka oo laga deyrinaayo ayaa saaka waxaa Isbitaal Digfeer ku booqday Abwaan Cismaan C/lahi Guure iyo Wariye C/Maalik Coldoon, kuwaasi oo u kuurgalay Xaalada Abwaanka. Muddooyinkii dambe Abwaan Sangub ayaa ka cabanaayay xanuuno ay ka mid yihiin Sonkor iyo ...
Jilaa Caan ah oo ka baxsaday Dalka Itoobiya kana hadlay sababta ku kaliftay in uu baxsado
September 27, 2016	Fanka & Suugaanta, Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Jilaa Caan ah oo ka baxsaday Dalka Itoobiya kana hadlay sababta ku kaliftay in uu baxsado
254 Views Jilaa si weyn looga yaqaano dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu kasoo baxsaday, waxa uuna Jilaagaan magan galyo siyaasadeed weydiistay Dowlada Mareykanka. Znah-Bzu Tsegaye, oo kamid ahaa jilayaasha ugu caansan dalka Itoobiya kana qeyb qaatay jiliinka filimaan caan ah ayaa sheegay in uu noloshiisa kala soo baxsaday tacadiyada ay ciidamada Itoobiya u geesanayaan dadka shacabka. Jilaagan oo ...
MUCJISO:- Fanaanad Soomaaliyeed oo la kulantay Mucjiso kana baxday Fanka
September 26, 2016	Fanka & Suugaanta, Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on MUCJISO:- Fanaanad Soomaaliyeed oo la kulantay Mucjiso kana baxday Fanka
263 Views Fanaanada Tufaax Darajo oo kamid ah Fanaaniinta Soomaalida ee ku dhaqan Qaarada Yurub ayaa Maanta ka Warbixisay Arin Mucjiso ah oo ku dhacday, iyadoona sheegtay in IFKA lagu Tusay wax ay ku Waayo Aragto. Tufaax ayaa waxay sheegtay in iyada oo Soconaysa loo sheegay inay Dhimanayso, Markaasina ay Awoodi wayday inay Wax dhaq-dhaqaaq ah Samayso, Sidoo kalana Maalmihii ugu danbeeyay ...
Daawo Muuqaalka:Fanaanka dayax Dalnuurshe Soomaaliyeey is jeclaada oo Tageera orad yahanada oo..
September 8, 2016	Fanka & Suugaanta, Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Daawo Muuqaalka:Fanaanka dayax Dalnuurshe Soomaaliyeey is jeclaada oo Tageera orad yahanada oo..
244 Views Daawo Muuqaalka Fanaanaka dayax dalnuurshe oo aad uga hadlay arin Quseeysa Gabadha orad yahanka aheed oo u tartameeysay Soomalia oo aad looga Gudbiyay fadeexad iyo wax yaabo kale oo aan loo baahneen, Muxuu Yiri dayax dalnuurshe. Soomaaliyeey aan is jeclaano aan iska deeyno naceebka naga Galay isirka Joogtada ah oo aan meel loo firiyo aan la hayn waxaana muhiim ah ...
Daawo Muuqaalka: Fanaanad Ruxday mugdisho Qadka ka saartay Fanaaniintii hore Nadira Nayruus oo…
September 8, 2016	Fanka & Suugaanta
Comments Off on Daawo Muuqaalka: Fanaanad Ruxday mugdisho Qadka ka saartay Fanaaniintii hore Nadira Nayruus oo…
246 Views Daawo muuqaalka Fanaanad Mugdisho Qabsatay si Dur Dur ah suuqa ku soo gashay cod macaan iyo dheel ka dib Markii ay Suuqa ka saartay fanaaniintii hore ayaa waxaa aad u hadal haya shacabka, Fanaanadan oo lagu magacabo Nadiira nayruus oo Noqotay Boqorada codka Mugdisho heeso jaceyl ah oo shacabka Gil gilay ayaa lagu wadaa in ay keento Heeso wadani iyo ...
Daawo Muuqaalka: Fanaanada Leyla laki oo hees Dhuleeyga ayaan ku dhiman dar dar ka….
September 6, 2016	Fanka & Suugaanta
Comments Off on Daawo Muuqaalka: Fanaanada Leyla laki oo hees Dhuleeyga ayaan ku dhiman dar dar ka….
178 Views Daawo Muuqaalka Fanaanada mar qura ka soo ifbaxday magalada Mugdisho oo fanaaniintii hore uga tagtay wadada ayaa soo is taagtay Meel Fagaaro ah, Fanaanada ayaa lagu magacaabaa Leeyla laki waxaana ay Qaaday hees wadani iyo tahriibta ku saabsan , Maxay Turi Fanaanada dhulkeeyga ayaan ku dhiman Dhuleeyga ka Guuri maayo, Qaxooti u dhuuman maayo, Magafe i dharbaaximaayo.
Page 4 of 10« First...«23456	»	...Last »	Design by: Saafi Films Team.